Njirimara na ịdị mkpa nke osimiri Danube | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka osimiri nke abụọ kachasị ogologo na Europe. Ọ gbasara Osimiri Danube. A na-ahụta ya dị ka nnukwu okike nke ahịhịa na anụmanụ ebe ihe karịrị ụdị anụmanụ 4.000 na 1.000 ahịhịa na-ebikọ ọnụ n'okporo ụzọ ya. O nwere oke ima nma nke putara n’inwekwa ebe obibi. Mkpa ọ dị na uru ya, azụmaahịa ya na gburugburu ya.
Anyị ga-agwa gị njirimara niile nke Osimiri Danube na otu o si dị mkpa ma ọ bụrụ nke ọma, azụmaahịa na gburugburu ebe obibi.
2 Njirimara nke osimiri Danube
3 Mkpa Osimiri Danube
4 Mmetọ na idei mmiri
Ebe mbido ya bidoro n'ọhịa ojii nke Germany. N'ime njem ya dum na-eme njem karịrị mba 10 na etiti na ọwụwa anyanwụ Europe. A gbakwunyere nke a na ọ gafere isi obodo Europe nke dị ezigbo mkpa ma gwụchaa na-asọba n'Oké Osimiri Ojii. Ọhịa ojii ebe a mụrụ ya dị na ugwu ugwu nke a na-ahazi dị ka ebe ndị njem nleta.
N'ime mba ọ gafere, anyị nwere ihe ndị a:
Isi mmalite ya bụ njikọta nke osimiri abụọ a na-akpọ Brigach na Breg. Ọ dara n'ime Osimiri Ojii na Romania. Ya eruba bụ nnukwu ezu nke mere na na-ebugharị ihe karịrị kilomita 2.860 n’ogologo. Nke a mere ya osimiri nke abụọ kachasị ogologo na Europe niile n’akụkụ Volga Osimiri dị na Russia.
Na Osimiri Danube anyị na-ahụ mpaghara ihe dịka 800.000 square kilomita ma ọ gafere karịa mba 10 na mkpokọta. Enwere ike ịkọwapụta ha n'azụ mpaghara ndị ọzọ amata n'akụkụ osimiri ahụ. Otu n'ime ha bụ mmalite nke osimiri ahụ na Bratislava. Site na ị nwere ike akụkụ ọzọ anyị nwere ike kewaa ya na Bratislava ruo Iron Gates dị n’etiti Serbia na Romania. Ikpeazụ nke osimiri a sitere n'akụkụ a ruo n'ọnụ Oké Osimiri Ojii.
Ikekwe akụkụ kachasị mkpa ga-abụ nke Ọnụ Ironzọ Irongwè, ebe ọ bụ na e nwere usoro a na-akpọ Natural Gorges, Golubac, Gospelodin na Kazan, nke bụ ndị na-eme ka ụgbọ mmiri niile gafee n'ihi na ebe a ọ na-ebelata oke. ụzọ mmiri.
Njirimara nke osimiri Danube
Otu ihe njiri mara nke osimiri a bụ na a na-enyocha ya n'ihe niile dịka oke oke ya. Ebe ọ bụ na akụkụ nke Germany na-ezute ọtụtụ ụtụ ndị na-esi n’ebe ndị ka mkpa a na-arụ ọrụ ugbo arụ ọrụ. Ọ na-nwere a bukwanu eruba eruba na akara na ọkwa nke bezin. Ọ bụghị navigable na okwu nke okporo ụzọ tụnyere ndị ọzọ isi osimiri na Europe. Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnyagharịa, ebe ọ pere mpe, ọ nweghị ikike dị ukwuu iji nabata nnukwu okporo ụzọ.
A na-ewere ya dị ka Amazon nke Europe ma bụrụ osimiri dị mkpa nke mba ụwa. Ọbụghị naanị n’ihi ịdị mkpa akụ na ụba na gburugburu ebe obibi ya, kamakwa n’ihi na o nwere ọdịdị ala mara mma n’akụkụ ụzọ ya.
N'ime mmiri a niile, anyị na-ahụ anụmanụ dị mma. Osimiri Danube nwere ọtụtụ ụdị salmọn, nnụnụ, sturgeons, wdg. Banyere flora, anyị nwekwara ụdị dị iche iche dị n'oké ọhịa na nnukwu ala dị larịị nke mejupụtara ụfọdụ usoro ihe oriri na ụba na Europe. Anyị amataworị na a na-ahụkarị ọtụtụ ụdị dị iche iche na ndụ dị iche iche na mmiri na gburugburu mmiri niile.
N'ime mmiri mmiri kachasị mkpa anyị hụrụ n'ime osimiri a (enwere ihe karịrị 70) anyị nwere sturgeon, caviar, shad, European languid na ndị ọzọ mollusks na amphibians. Anyi nwekwara otutu heron, cormorant na pelicans.
Enwere isi ebe na Danube na ndabere na converges na osimiri Rhine. Ọ bụ osimiri a na - eme ka mmiri Danube na - asọba n’Oké Osimiri Ojii.
Mkpa Osimiri Danube
Mkpa nke osimiri a abụghị naanị ọnụ ọgụgụ mba ọ na-agafe, kamakwa n'ọtụtụ isi obodo. Site na nke a enwere ike ịkọwapụta na ọ dị ezigbo mkpa, ọkachasị n'ihi na ọ nwere ọwa mmiri ozuzo nke na-eje ozi dị ka akwa mba ụwa maka ọrụ ugbo, ịkụ azụ, njem nleta, azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọ bụ osimiri a na-ejikarị dị ka njem azụmahịa. Mba nke Osimiri Danube gafere na-erite uru n'eziokwu ahụ bụ na a pụrụ ịnyagharị osimiri a ka ọ nwee ike bufee akụrụngwa nke ụgbọala, nchara, ụgbọ okporo ígwè, kemịkalụ, mmanụ, wdg. Fọdụ ụdị ụgbọ ala a kacha mara amara bụ ndị na-eji ọwa a ebufe ihe. Ọ bụrụ na omume iji osimiri a na-ebugharị na-abawanye, a na-eme atụmatụ na n'ime afọ iri na-abịanụ, njem ụgbọ mmiri na osimiri a ga-amụba okpukpu abụọ.
Ọ dịkwa mkpa na usoro nke ọdọ mmiri ya. Na njem ya, o nwere ọtụtụ osisi na-ewepụta ihe ọkụkụ na arịa dị iche iche nke ewuru. Maka ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo na ịkụ azụ ọdọ mmiri ndị a nwere nnukwu mmasị akụ na ụba. Ngwongwo kachasị mkpa bụ nke ọnụ ụzọ Iron. Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nke ewuru na 60s iji nweta mmiri nke iyi a ma gbanwee ya ike hydroelectric. Na mgbakwunye, ọ na - arụkwa ọrụ iji meziwanye usoro nke igodo, nke n'oge ahụ dị oke egwu n'ihi oke iyi mmiri siri ike nke ndị ọchịchị ikuku a na - ekwu.
Ihe a niile enyerela njem nlegharị anya ka enwere ihu ọma ebe enwere nnukwu ụgbọ mmiri, ụdị ụgbọ mmiri dị iche iche ebe ị nwere ike ịme njem ahụ n'afọ na nke ọtụtụ puku ndị njem si n'akụkụ ụwa niile gara.
Mmetọ na idei mmiri
Ihe na-ezighi ezi banyere osimiri a bụ na ọ nwere ọtụtụ mmetụta na-adịghị mma. Otu bụ na nwoke ahụ rụrụ arụ na mmiri site na Ulo oru, ihe mkpofu na oke ohia nke ihe okike tinyere otutu umu ahihia na umu anumanu na egwu. Mwube nke mmiri mgbochi mmiri, igbe na-emetụtakwa ndagwurugwu osimiri ahụ.
A na-emetọkwa mmiri sitere n’ịkọ ugbo site na nfu nke fatịlaịza na ọgwụ ahụhụ na-enweghị ezigbo ọwara mmiri. Ihe ndị a niile na-eyi egwu ịlanarị sturgeon, beaver, pelikan na ọdọ mmiri ọdọ mmiri Europe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị osimiri Danube.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Osimiri Danube
Msdị atọmịk Thomson